FANOMEZANA | anjara-biriky
- a s s o c i a t i o n -
ICI le rapport annuel 2019-20
CLICK for the Annual Report 2019-20
Don en ligne - Donate online
En raison de la crise sanitaire (Covid-19), les projets 2020-21 et 2021-22 ont été annulés à l'exception de la distribution des bourses
Due to the Covid-19, 2020-21 & 2021-22 projects have been cancelled except for the scolarship program
Natsahatra daholo ny asa rehetra nandritra ny taom-pianarana 2020-21 sy 2021-22 ity no ho ny Covid-19. Vita soa aman-tsara anefa ny fizarana fitaovam-pianarana an'ireo mpianatra mendrika.
MANIRY HANDRAY ANJARA VE IANAO ?
Maro ireo olona maniry hanome entana sy kojakoja ho an'ireo sekoly any Madagasikara fa noho ny hasarotan'ny fandefasana entana dia tsy afaka mandray izany izahay aloha izao. Misy nefa ireo fikambanana afaka mandray izany kojakoja izany ka aza misalasala manantona azy ireny. Afaka anefa ianao mandefa vola mivantana any amin' ny banky na koa mandefa sheky aty amin' ny foibe na manome mivantana vola an'ireo mpikambana. Raha misy fanontaniana dia aza misalasala miantso ny mpiandraikitra.
Raha maniry hiditra mpikambana ianao dia manorata anay.
Anjara Biriky Association dia nivoaka tamin'ny Gazetim-panjakan'ny Repoblika Frantsay mitondra ny laharana faha - 0035 ny 31/08/2013
Fampandrenesana laharana faha - 01245
Laharana RNA: W922007162
+ 33 6 87 43 06 67
MISAOTRA ANAO AMIN' NY FANDRAISANA ANJARA
NY FANDEFASANA VOLA
CREDIT AGRICOLE IDF – 10 Rue de Vouillé - Paris 75015
Anjara Biriky dia mandefa taratasy porofo (email) ho an’ny olona rehetra nandrotsaka vola ho an’ny fikambanana. Raha tsy voarainao izany taratasy izany 10 andro aorian'ny nandefasanao ny vola dia mandefasa mailaka anay.
Mangataka anareo mpandray anjara izahay mba hanome anay ny adiresy mail-nareo. Izany no hahafahanay mampilaza sy manazava anareo ny fizotran'ny raharaha (ny vola voahangona sy ny nampiasana azy, ny zava-bita, ...) amin'ny halalan'ny Newsletter na Vaovao
© 2013 - 2021 by Anjara Biriky Association